Degmadeennu waxay hoy u tahay Barnaamijka Barashada Luqadda ee ugu weyn Minnesota oo ay wax ka bartaan in ka badan 2,000 oo arday oo hoose ka diiwaangashan barnaamijkeenna buuxa.
Iskuulka Isbaanishka waxaa loo bixiyaa barnaamij iskuul-iskuul oo laga bixiyaa Clear Springs, Deephaven, Groveland, iyo Minnewashta Elementary Schools. Qiyaastii kalabar dhammaan ardayda Kindergarten-ka ee dugsi kasta waxay iska diiwaangeliyaan Isbaanishka Imtixaanka iyo badh ayaa iska diiwaangeliya barnaamijka Xanaanada Carruurta ee Ingiriiska.
Barnaamijkeena Immersion, 100% waxbarista fasalka waxaa lagu baraa Isbaanish laga bilaabo xanaanada ilaa fasalka 2aad. Ardaydu waxay bilaabaan Farshaxanka Luuqadda Ingiriiska iyo barashada akhriska ee fasalka saddexaad. Ardaydeenu waxay si heer sare ah ugu shaqeeyaan Ingiriis iyo Isbaanish labadaba. Marka la gaadho fasalka shanaad, ardaydeena Imtixaanka Isbaanishka waxay buundooyin ka keenaan sidoo kale imtixaannada akhriska iyo qorista Ingiriisiga sida dhiggooda ku jira barnaamijka Ingiriisiga.
Maxaad Isbaanishka u Barataa?
Luuqada Isbaanishka ayaa ah luuqada labaad ee ugu badan wadanka mareykanka, waana luqada afaraad ee inta badan aduunka looga hadlo (marka laga reebo ingiriisiga, shiinaha iyo Hindustani). Waa luqad rasmi ah oo ku taal afar qaaradood isla markaana ah luqad labaad oo joogto ah Yurub.
Tirada dadka Hispanic-ku waa dadka ugu dhaqsaha badan ee ku sii koraya gudaha Mareykanka, oo soo bandhiga fursado gudaha ah oo waaweyn, iyo sidoo kale fursado shaqo oo loogu talagalay xirfadleyda ku hadla labada luuqadood.
Maaddaama waddamada Latin America ay xoojinayaan oo ay ballaarinayaan dhaqaalahooda, waxay noqonayaan kuwo aad muhiim ugu ah la-hawlgalayaasha ganacsiga. Dalal badan oo Latin Amerika ah ayaa saxeexay, ama qarka u saaran inay saxeexaan, NAFTA (North American Free Trade Agreement), oo markii hore ay dejiyeen Maraykanka, Kanada iyo Mexico. Tani waa inay sii xoojisaa xiriirka ganacsi iyo ganacsi ee ka dhexeeya dalalkan iyo Mareykanka - taasoo ka dhigaysa ku hadalka luuqada Isbaanishka xitaa hanti aad muhiim ugu ah dadka Mareykanka ah ee ku nool dunida ganacsiga.
Isbaanishku waa luuqad si fudud wax loo barto maxaa yeelay ereybixintiisa badan waxay la mid tahay Ingiriisiga. Isbaanishku wuxuu leeyahay diiwaangelinta ugu sareysa labada dugsi dhexe iyo dugsiga sare ee Minnetonka.